D/T/Koree Dh/Dh/Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa Kab. Obbo Lachiisaa Hayyuu Gabaasa Raawwii Hojii Bara 2012 Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate ilaalchisee hordoffiifi to’annoo Koreewwan Dhaabbii bara kana taasisaa turan cuunfuun yaada waliigalaa Caffeef dhiyeessanii jiru.
Karooraafi Baajata hojiiwwan bara 2012 Caffeen jalqaba waggaa irratti raggaase bu’uura godhachuun kurmaana kurmaanaan raawwii manneen hojii gamaaggamaa kan turan yommuu ta’u, raawwii hojiiwwan misoomaa dirreerra jiruun walqabatee keessattuu raawwii hojii ashaaraa magariisaafi kenna tajaajila lammummaan walqabatee hojjetamaa ture ilaalchisee daawwannaa dirree taasisuu isaanii ibsan.
Raawwiin gama bulchiinsaafi seeraatiin jiru, olaantummaa seeraa mirkaneessuun walitti dhufeenya naannolee ollaa cimsuuf, kabaja Guyyaa SSUI 14ffaafi Irreecha Hora Finfinnee nagaan kabajamee akka xumuuramuuf gaheen qaamolee nageenyaa gumaachan akka ciminaatti kan ilaalame ta’uu ibsan. Haa ta’u malee, qindoominni qaamolee haqaafi nageenyaa jidduu jiru, tajaajila haqaa saffisaafi haqa qabeessa ummataaf kennuu irrattiifi yakka dursanii ittisuu irratti raawwiin jiru hanqina kan qabu ta’uu Obbo Lachiisaan ibsaniiru.
Kilaastara Diinagdee Misooma Baadiyyaafi Magaalaan walqabatee, teeknoloojiiwwan qonnaa makaanaayizeeshiniitti fayyadamuun, misooma jallisii hammayyeessuu, qonnaan bultootaafi horsiise bultoota qabeenya horatan gara invastimantiitti galchuuf jalqabbiin jiru hojiin misooma magaarisaa, piroojeektota buleeyyii 4000 ol xumuursisuun tajaajilaaf oolchuuniifi caalbaasiiwwan haaraa kurmaana 1ffaa keessatti xumuuruuf jalqabbiin jiru akka ciminaatti ilaalamee jira.
Gama biraatiin, sirna eksteenshinii qonnaa lafa qabsiisuuf deggarsi ogummaa taasifamaa jiru, calla guddistuu qonnaa yeroofi qulqullinaan iddoo barbaadamutti dhiyeessuu irratti, walitti hidhamiinsa gabaa jimaa uumuun walqabatee, piroojeektota tokko tokko yeroofi qulqullinaan xumuruun walqabatee, diizaayinii piroojeektotaa ragaa qulqulluu irratti hundaa’uun qopheessuu irratti, alseerummaa lafaafi daldalaan walqabatee jiruufi argannoowwan odiitii irratti tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamaa jiran harkifannaa kan qabaniifi akka hanqinaatti koreewwan kanaan kan ilaalaman ta’uu ibsaniiru.
Gama Hawaasummaatiin, weerara COVID - 19 ittisuu irratti tattaaffiin taasifamaa jiru, naannolee biroo keessatti afaan birootiin barsiisuuf hojiin hojjetame, odeeffannoo gahaa hawaasaan gahuuf OBN tamsaasa TVfi Raadiyoo FM dabaluuf hojiin hojjechaa ture, aadaafi duudhaa ummataa guddisuufi dubartoonniifi dargaggoonni hojii kenna tajaajila lammummaa irratti hirmaachuun hojiin hojjetame akka ciminaatti koreewwan kanaan kan ilaalame ta’uu ibsan.
Haa ta’u malee, du’aatii haadholiifi daa’immanii xiqqeessuun walqabatee, dhiyeessiin qorichaa dhaabbilee fayyaa, manneen barnootaa suphuufi haaraa ijaaruun, mirga hojjetaafi hojjechiisaa kabachiisuun walqabatee hordoffiifi to’annoo gaggeeffameen raawwiin waliigalaa akka hanqinaatti kan ilaalame ta’uu ibsaniiru.
Walumaagalatti, gabaasni Pireezidaantii MNOtiin dhiyaate hordoffiifi to’annoo koreewwan dhaabbii bara kana taasisaa turaniin qoratamaa, xiinxalamaafi kallattiin irratti kennamaa kan ture ta’uu ibsuun Caffeen gabaasa kana akka raggaasisuuf gaafatan.
Toorbee kana 1212
Ji'a kana 14632
2008 irraa eggalee 4630120